Maxaa laga bartay kulankii Chelsea iyo Man Utd? | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Maxaa laga bartay kulankii Chelsea iyo Man Utd?
Maxaa laga bartay kulankii Chelsea iyo Man Utd?
Posted by: Ahmed Haaddi October 20, 2018
Muqdisho – Waxaa maanta uu kulan xiisa badan dhex maray kooxaha sida weyn u xafiiltama ee Chelsea iyo Man Utd, ciyaartan waxa ay ka qabsoomtay garoonka Stamford Bridge ee dhaca galbeedka magaalada London.
Bilowga qeybta koowaad labada koox ayaa soo bandhigay ciyaaro loo riyaaqay balse naadiga Blues ayaa moodeysay iney aheyd midda ku gacan sareysay heysashada kubadaha, waxaana qeybta koowaad lagu kala nastay 1- 0 oo ay ku hor boodayaan wiilsha Sari, kaddib gool uu dhaliyey Antonio Rudiger caawin uu ka helay Willian.
Markii dib la isugu soo laabtay kooxda Man Utd ayaa carcar garoonka lasoo gashay waxaana u suura geshay in ay helaan goolka barbaraha iyaga oo kahelay Anthony Martial.
Daqiiqadii 73aad waxaa mar kale shabaqa Chelsea gaaray laacibka Faransiiska Anthony Martial
Kaddib caawin uu ka helay Marcus Rashford.
Hase yeeshee wax waliba waxay soo idlaadeen markii uu daqiiqaddi 95 uu goolka dhaliyey laacibka seddexda libaax Ross Barkley,wuxuuna laacibkaan kulanka ka dhigay barbaro 2-2 ah.
Guud ahaan ciyaartii xiisaha badneyd ayaa kusoo idlaatay barbaro 2-2 ah oo ay labada naadi isku mari waayeen.
Xaqiiqda Laga bartay Kulankaan.
Chelsea ayaan laga adkaan 65-kii kulan ee ugu danbeyay Premier League oo ay ku ciyaareen gurigooda Stamford Bridge 54 guul iyo 11 barbaro, qasaaradii ugu danbeysay waxay kala kulmeen Arsenal bishii October 2011, markaasi oo looga adkaaday 5-3.
Tan iyo markii uu soo muuqday bishii September 2015, Anthony Martial ayaa ka goolal badan dhammaan tartamada mid kasta oo kamid ah xiddigaha Manchester United.
Anthony Martial ayaa laba gool u dhaliyey Man Utd horyaalka Plka, markii ugu horeysay tan iyo November 2016 markaasi oo uu ka hortegay naadiga West Ham.
Ross Barkley ayaa xilli danbe gool ka dhaliyey kooxda Man Utd horyaalka Premier League,t an iyo bishii October 2009, markaas oo uu David Ngog gool dhaliyey daqiiqaddii 95:21 kulan uu ka hortegay naadiga Man Utd isaga oo matalaya Liverbool.
Previous: Josep Maria Bartomeu: “Barcelona waa ay soo iibsan doontaa daafac dhexe”
Next: Toban sano kaddib El Clasico oo yeelaneysa weji kale